RATSIRAKA ELYSE : « Mitady tombontsoa mihoa-pampana ireo mpanolotsaina monisipaly » | NewsMada
RATSIRAKA ELYSE : « Mitady tombontsoa mihoa-pampana ireo mpanolotsaina monisipaly »
Par Freenews sur 07/04/2017
Tsy nitsitsy fitenenana ny ben’ny Tanàna, Ratsiraka Elysé.
Manoloana ny fampiatoana ny ben’ny Tanànan’i Toamasina Renivohitra, amin’izao fotoana izao. Nilaza ny ben’ny Tanàna, Ratsiraka Elysé omaly, fa tia vola sy mitady tombontsoa mihoa-pampana, sady tsy mahay ny asany ny mpanolotsaina monisipaly…
Nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety tetsy Antaninarenina, ny ben’ny Tanànan’i Toamasina renivohitra, Ratsiraka Elysé, omaly. Manoloana ny fampiatoana azy eo amin’ny asany, nilaza mazava, Ratsiraka Elysé, ben’ny Tanànan’i Toamasina avy amin’ny Mapar ity fa : « tsy hain’ireo mpanolotsaina monisipaly ny asany. Mihevitra ny tenany ho eo ambonin’ny ben’ny Tanàna izy ireo. Manjaka eo amin’izy ireo ny fitiavan-tseza, fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra ary ny fitadiavana tombontsoa mihoa-pampana ». Nohitsiny fa nanjary lamaody ny fampiatoana ben’ny Tanàna tato ho ato. Ny fanjakana, etsy andaniny izay, tsy mandray andraikitra manandrify azy manoloana ireo tsy fetezan-javatra maro samihafa. Anisan’ny nampitainy fa efa nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety ny Prefét-n’i Toamasina fa tsy miato ny ben’ny Tanànan’i Toamasina, miasa ary mbola hiasa.
Tia vola diso tafahoatra
Tsy manara-dalàna ny fomba fiasan’ireo mpanolotsaina monisipaly, raha ny famakiana bantsilana notontosain’ny ben’ny Tanànan’i Toamasina, Ratsiraka Elysé. Anisan’izany ny fanovaovan’izy ireo ny lahadinika inefatra miantoana. Raha ny tokony ho izy, tsy azo kitihina ny na ovaina ny lahadinika, izay midika fa tsy ara-dalàna. Nisy ny fotoana, izay hanatanterahan’izy ireo filankevitra monisipaly fivoriana ary tsy ilaina ny fanatrehan’ny ben’ny Tanàna, kanefa io no roritina ary nanaovana ny fampiatoana ny ben’ny Tanàna.
Ankoatr’izay, tia vola loatra ireto mpanolotsaina ireto. Lohalaharana amin’izany ny filohan’ny filankevitra monisipaly. Marobe ireo tombontsoa tian’izy ireo ho azo, raha tsy hiresaka afa-tsy ny tokony hahazoan’ny filohan’ny filankevitra monisipaly fiara, raha toa ka tsy maintsy mahazo môtô avokoa ireo mpanolotsaina monisipaly, ankoatra ny fanomezana azy ireo trano. Fanampin’izay ny hahazoan’izy ireo solika mitentim-bidy 500.000 ariary ka hatramin’ny 900.000 ariary isam-bolana. Manampy trotraka ny mbola fangatahan’izy ireo ny tambim-ponenana. Nampidirin’izy ireo ao anatin’ny fitsipiky anatiny mihitsy ireo tombontsoa mihoa-pampana ireo. Nisy ny fanaovana latsa-bato momba ny fampiatoana ny ben’ny Tanàna, nisy fizaram-bola tao. Manaporofo izany fa tia vola loatra ireo mpanolotsaina monispaly ireo.